Voahosotra ho tompondakan’ny Ranomasimbe Indianina teo amin’ny sokajy vehivavy ny Stef’auto, izay nandavo ny Tranquebar Black Rangers avy any Maorisy tamin’ny alalan’ny seta 3 no ho 1. Sambany izy ireo no nahazo izany.
Mbola nahazo amboara manokana teo amin’ny mpanafika tsara indrindra ihany koa I Alfred Rose de Lima (Stef’auto); mpamahana mendrika indrindra I Mamode Ismael Dadjiman (Stef’auto) sy Sehonirina Bernardia (3FB). Teo amin’ny lehilahy kosa dia “libero” mendrika indrindra I Tsiory (AS Voara), raha mpamahana tsara indrindra I Boudha sy Malakia samy mpilalao ao amin’ity ekipan’ny AS Voara ity avokoa.
Lavon’ny AS Voara kosa ny Camp Ithier Volley Ball, avy any Maorisy, teo amin’ny famaranana ho an’ny lehilahy. Efa nitarika tamin’ny alalan’ny seta 3 no ho 2 (15/25, 23/25, 30/28, 27/25, 15/10) ny nahatafavoaka azy ireo tamin’izany.